Labo xiddig oo muhiim ah oo suuqa xagaaga ka tagaya kooxda Manchester United – Gool FM
Labo xiddig oo muhiim ah oo suuqa xagaaga ka tagaya kooxda Manchester United
(Manchester) 26 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay lumin karto labadeeda ciyaaryahan ee muhiimka ah, Ander Herrera iyo Juan Mata kuwaasoo beeca xorta ah ku bixi kara dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Labada ciyaaryahan ee Herrera iyo Mata ayaa heshiisyadooda kooxda Man United waxa ay ku eg yihiin xagaagan, waxaana kan hore ee Ander si xoog leh loola xiriinayay inuu u dhaqaaqi doono naadiga Paris Saint-Germain isbuucyadii dhowaa.
Herrera ayaa ka mid noqday xiddigaha furaha u ah kooxda Red Devils tan iyo markii uu Ole Gunnar Solskjaer xilka tababarennimo ka bedelay Jose Mourinho bishii December, laakiin Mata ayaa ku dhibtooynaya inuu boos joogto ah helo.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in labadaan xiddig ee reer Spain, Herrera iyo Mata wakiiladoodu ay doonayaan inay soo dhammeeyaan heshiiyo ay kooxo kale ugu biirayaan, laakiin Man Utd ayaa rabta inay la kulanto si ay ugala hadasho inay heshiisyada u kordhiyaan.
Man United ayaa indhaha ku haysa inay ka soo kabato guuldarrooyinkii ka soo gaaray kooxaha Arsenal iyo Wolverhampton Wanderers marka ay garoonkooda ku qaabilayaan naadiga Watford kulan ka tirsan horyaalka Premier League todobaadka soo socda.
Kooxda Arsenal oo saddexdaan ciyaaryahan midkood ku buuxsanaysa booska uu ka baxay Aaron Ramsey